लहरेबाली तरकारी खेती कसरी गर्ने ?
बुधबार, असार ९, २०७८ ०१:३८:२३ युनिकोड
मंगलबार, जेठ ११, २०७८ Dhading Sanchar
श्याम कुमार श्रेष्ठ ।
नेपालको भौगोलिक बनावट, हावापानी तथा अवसरको हिसाबले कृषि क्षेत्र एक प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । जसमा दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने तरकारीले छुट्टै भुमिका खेलेको छ । बिगत देखी हाल सम्म पनि निर्वाहमुखी, परम्परागत खेती प्रविधिले गर्दा नेपालमा कृषिमा उन्नती गर्न सकेको छैन । सो कारणले गर्दा सरकारी तबर बाट नै उचित कृषि निती,उत्पादनमा विभिधीकरण, यान्त्रीकरण, प्रशोधन जस्तो पाटोमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
लहरेबालि तरकारीहरु बिशेष गरेर कलिला तथा छिप्पीएका फल तथा कलिला मुन्टा र जरा समेत उपभोग गरिन्छ । जस अन्तर्गत फर्सी, लौका, काक्रो, घिरौला, इस्कुस आदि पर्दछन् । जसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फाइदा छ । तरकारी बाली छिटो मुनाफा कमाउने कृषि कर्म हो सो कारण यसलाई नगदे बालिको रुपमा पनि लिइन्छ । सो अनुरुप यस सँग सम्बन्धित खेती गर्ने तरीका बारे सामान्य जानकारी मुलक लेख राखेको छु, जसले कृषक मात्र नभई कृषि प्राबिधिक, कृषिमा इच्छुक सम्पुर्णमा उपयोगी होला भन्ने आशा छ र साथसाथै हजुरहरुको प्रतिक्रियाको पनि प्रतिक्षामा छु ।
(क)बालीको जातः काक्रो
परिचयः यो एक लहरेबालीको महत्वपुर्ण बाली अन्र्तगत पर्दछ । यसमा अधिकतम पानीको मात्रा बढि हुने भएकाले गर्मि महिना काचै नुन खुर्सानीको साथमा लिन सकिन्छ । यसको सलाद,अचार,तरकारी तथा सिदै फल खान सकिन्छ ।
हावापानी र माटोः तापक्रम १५ डिग्री सेल्सियस देखि २४ डिग्री सेल्सियस उपयुक्त मानिन्छ ।सापेक्षिक आद्रता ७० देखि ७५ % उपयुक्त मानिन्छ । र माटोको कुरा गर्दा प्राङ्गारिक पर्दाथ प्रशस्त भएको उर्वर जमिन उपयुक्त हुन्छ । यस खेतीको लागी पि.एच्. ६–७ उपयुक्त हुन्छ।
जातहरुः भक्तपुरे स्थानिय, लङ्ग ग्रीन , हाइब्रिड जातहरु चाँदनी। मलिका, कोपीला,गौरी,सालिनी इत्यादि ।
बीउ रोप्ने समयः यो मौसम अनुसार भिन्न हुन्छ । उच्च पहाडमा चैत देखी असार, मध्य पहाडमा माघ देखि बैशाख र असार देखि भदौ यसै गरी बेसीं तथा तराइमा मंसिर –पुस र भदौ बेसीं तथा तराइमा कार्तिकमा बेर्ना हुर्काइन्छ ।
बाली लगाउने समयःउच्च पहाडमा बैशाख–साउन,मध्य पहाडमा फागुण–जेठ र साउन– असोज बेसीं तथा तराइमा चैत– साउन र भदौ–मंसिर मा बेर्ना सार्न सकिन्छ ।
बाली टिप्ने समयः उच्च पहाडमा असार–कार्तिक मध्य पहाडमा चैत–साउन र भदौ– मंसिर बेसीं तथा तराइमा फागुण– बैशाख र कार्तिक–माघ मा बाली लिन सकिन्छ ।
जमिनको तयारीः जमिनलाई २–३ पटक राम्ररी जोतेर बुर्बुराउँदो बनाउनु पर्दछ । यसलाई ड्याङ्ग वा प्लटमा पनि लगाउन सकिन्छ । सिंचाइ तथा अन्य कार्य गर्दा सहजताको लागी २५–३० से.मी. फराकिलो अनि १५ से.मी. गहिरो खाडल ड्याङ्ग वा प्लटको बिचमा खन्नु पर्दछ ।
मलखादः १ रोपनीको लागी १००० –१५०० के.जी. गोबर मल, ७ :५ः८ के.जी. क्रमशः नाइट्रोजन,फस्फोरस र पोटास पर रोपनीको लागी राख्नुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार अन्य शुक्ष्म तत्वहरु प्नि राख्नु पर्दछ ।
बेर्ना सार्ने दुरीः जात अनुसार लगाउने दुरी फरक फरक हुन्छ । हाइब्रिड जातमा हाँगा झाँगीने कम हुने हुनाले ७५८७५ से.मि. मा लगाउन सकिन्छ भने लोकल जातमा यो भन्दा बढि दुरि कायम गरेर लगाउनु उपयुक्त मानिन्छ ।
बेर्ना सार्ने तरीकाः बेर्ना ३–४ पात भएको वा जर्खराएको बेर्नालाई सार्नु भन्दा पहिले व्याड वा पोलिथिन व्यागमा पानी राख्नुपर्छ । बेर्ना सार्दा बेलुखीपख तीर व्याग काटेर माटोको डल्ला सहित सार्नुपर्छ । सकिन्छ भने ३–४ दिन सम्म चर्को घामबाट जोगाउन पत्रिका, छापो बिस्तारै दिनुपर्छ ।
थप मलः बेर्ना सारेको १ हप्ता पछि ५ग्राम युरीया प्रति बोटको वरिपरी दिनु पर्दछ । यसै गरी सारेको १ महिना पछि र २ महिनामा अन्तिम पटक दिँदा हुन्छ । यसमा कन्टयाक किट कम गर्न झोलमलको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
सींचाइः हिउँदमा सिंचाई र बर्षाको लागी निकासको लागी ड्याङको बिचमा कुलेसो बनाउनु पर्दछ । गर्मि मौसमा ४ दिनको फरकमा र जाडो मौसममा १० दिन जतिको फरकमा सिंचाई गर्न सकिन्छ ।जमिनको चिस्यान हेरेर सींचाई गर्नु उपयुक्त रहन्छ ।
थाका्र दिनः लहरेबाली प्राय सबै बालीमा थाक्राको आवश्यकता पर्दछ भने झन् बर्षा याममा थाक्राको अति नै आवश्यक हुन्छ किनकी बर्षाले गर्दा फल बिग्रन सक्छ । आवश्यकता अनुसार ३०–३० से.मि. को फरकमा भाँटा गाडेर टाँड बनाउनु पर्दछ ।
काटछाँटः काँटछाँट भन्ने बित्तिकै बुढा,रोगी, पुरानो पात तथा हाँगा फल मुन्टा हटाउने कार्यलाई बुझिन्छ ।
फल टिप्ने : बिहान शित ओभाएपछी वा बेलुका तापक्रम घटेपछि टिप्नु पर्दछ । सलाद खान उपयुक्त वा मुठि भरि भएसी टिप्नु पर्दछ।
उत्पादनःखेती गर्ने तरीका,जात, जमिन, मौसम अनुसार उत्पादनमा फरक आउँद छ । औसतमा १००० देखी २३०० के.जी. प्रति रोपनी उत्पादन दिन्छ ।
पोष्ट हार्भेष्टः फल टिपी सकेपछीको उपभोक्तालै उपभोग गनु पुर्व गर्ने कार्य पोष्ट हार्भेष्ट हो। काँक्रामा चाँहि घाँउ ,चोटपटक लागेको,बाँङ्गाटिङ्गा ,पहेँलेका छुट्टै राखेर ग्रेडिङ गरी १०–१२ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ९५% आद्रतामा भण्डारण गनुपर्दछ ।
परिचयः यो एक प्रचलित तरकारी बालि हो ।फल तथा पात, मुन्टा दुबै प्रयोग गर्न मिल्ने तरकारी भएकाले यो प्रचलित छ । अरु तलनमा यसमा धेरै उत्पादन क्षमता,पौष्टिक तत्व,भण्डाण क्षमता ,ढुवानीमा कम क्षती भएकाले पनि यो बढि प्रचलित पाइन्छ ।
हावापानी र माटोः फर्सी गर्मि मौसमा हुने बालि हो । यसको लागी २५–३० डि.ग्री.सेल्सियस तापक्रम दिउँसोमा र रातीमा १८–२० डि.ग्री.सेल्सियस उपयुक्त हुन्छ तर यसले तुसारो अनि ४० डि.ग्री.सेल्सियस भन्दा बढि तापक्रम खप्न सक्दैन । माटोको कुरा गर्दा दोमट वा बलौटे दोमट माटो ठिक हुन्छ । पि.एच्.६.५–७.५ उत्तम हो ।
जातहरुः फर्सीमा अरु तरकारी जस्तो धेरै जात निकालिएको छैन । बानस्पतिक गुणको आधारमा नेपालि फर्सी,युरोपियन फर्सी , सुख्खा या गर्मिको लागी स्क्वाकस नै प्रचलित छ । हाल फर्सीको लागी सोनार–०२२ र स्क्वासको लागी जुकुनी बढि प्रचलित छ ।
बीउ रोप्ने समयः बिउ सोझै बारीमा रोप्ने वा बेर्ना सार्ने भन्ने कुरामा भर पर्दछ । जुन उच्च पहाडमा बैशाख–जेठ ,मध्य पहाडमा फागुण–चैत र तराई वा खोचको लागी माघ–फागुणमा गरिन्छ ।
बाली लगाउने समयः यो सीधै छरेर पनि लगाउन सकिन्छ, सो कारण बीउ रोप्ने र बेर्ना रोप्ने १ –२ हप्ताको फरकमा गर्न सकिन्छ ।
बाली टिप्ने समयः फर्सिलाई तरकारी रुपमा यसको मुन्टा,हरियो फल र पाकेको फल लिइन्छ । यसको मुन्टा र हरियो फल चाँहि आफैले अबलोकन गरेर टिप्नु पर्दछ । पाकेको फल चाँहि ढुवानी गर्ने दुरि हेरेर बेर्ना सारेको ८०–९० दिनमा टिप्नु पर्दछ । तर यो मौसम या उत्पादित क्षेत्र हेरेर फरक हुन सक्छ ।
जमिनको तयारीः फर्सि लगाउने जमिन २–३ पटक गहिरो गरि खन्ने, जोत्ने,डल्ला फुटाउने,झार जीलाउने
मलखादः एक रोपनी जमिनको लागी १५०० के.जी. गोबर मल,५ः३ः२ क्रमशः नाइट्रोजन,फस्फोरस र पोटास दिनु पर्दछ । टप ड्रेसिङ युरिया १.२५ के.जी. बोटले त्यान्द«ा निकालेपछि दिनु पर्दछ र पुनः फुल फुलेपछि राख्नु पर्दछ ।
बेर्ना सार्ने दुरीः फर्सिको झाल,हाँगाहरु लामो हु लने भएकाले कम्तिमा १.५ देखि २ मि. को बोट देखि बोट र त्यातिनै लाइन देखि लाइनको दुरि कायम गनुपर्दछ ।
बेर्ना सार्ने तरीकाः बेर्ना सार्दा बेर्ना ३–४ पात भए पछि यसलाई तयारी जमिनमा ५–७ से.सि.गहिराइमा सार्ने तर बिउ भए २ से.सि. गहिराइमा रोप्नु पर्छ । बीउ १ रोपनीमा १२०–१४० जति भए पुग्छ ।
सींचाइः यसलाई बेर्ना सार्दा वा बिउ रोपेपछि पानिको आवश्यकता पर्दछ । चिस्यान हेरेर यसलाई १–१ हप्ताको फरकमा सिंचाई दिनु उत्तम रहन्छ ।
थाक्रा दिने र गोडमेलः यो एक लहरेबालि भएकाले थाक्राको अति आवश्यक रहन्छ । थाक्रा दिँदा ड्याङको दुबै तर्फबाट घोँचा गाडि टाँड बनाइदिनु पदर्छ । माटो खुकुलो पार्न र झारको रोकथाम सहित माटोमा हावाको चहलपहल कायम राख्न गोडमेल गर्नुपर्दछ । थप दुई पटक युरिया दिने बेलामा गोडमेल दिुनु उत्तम रहन्छ ।
फल टिप्नेः यसको हरिया मुन्टा तथा फल पनि तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले उचित आकार हेरेर टिप्न सकिन्छ तर पाकेको फल टिप्नु पर्दा चाँहि बीउ वा बेर्ना सारको ८०–८५ दिनमा ढुवानी दुरी हेरेर टिप्नु पर्दछ ।
उत्पादनः यसमा हरिया फल कति टिपियो भनेरनि निर्भर गर्दछ । १ रोपनी मा २०००–२५०० के.जी. सम्म उत्पादन लिन सकिन्छ ।
पोष्ट हार्भेष्टःहरिया फर्सिलाई बोरा वा डोकामा राखेर बजार वा ढुवानी गर्ने साधन सम्म लान सकिन्छ । पाकेको फर्सिलाई भण्डारण गनु पर्दा चाँहि १०– १२ डि.ग्री.सेल्सियस ५०– ७०% आद«तामा राख्नु पर्दछ।
परिचयः यो पनि गर्मि मौसममा हुने तरकारी बालि हो । जुन कलिला र मनपर्दा तीता फलको प्रयोगको लागी गरिन्छ । यो एक औशधिको रुपमा पनि लिइन्छ जसको प्रयोगले रगत र पिसाबमा चिनीको मात्रा घटाँउदछ ।
हावापानी र माटोः यसको लागी न्यानो हावापानी चाहिन्छ । अधिकतम बालीको बृद्घि बिकासको लागी २५– ३० डि.ग्री.सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हुन्छ भने पि.एच्. चाँहि ६–७ उचित रहन्छ ।
जातहरुः गाँउ घरमा अझै पनि स्थानिय जातका बिउ लगाइन्छ जुन अलि बढि तीतो हुने गर्दछ । हाल यसको कोयम्बटोर लङ्क,हरियो करेला आदि छ भने बर्णशङ ्कण जातमा पाली,एन्.एस.चन्द«,लक्ष्मी,पीपल, आदि छन् ।
बीउ रोप्ने समयः हावापानि तथा मौसमको आधरमा बाली लगाउने समय फरक फरक हुन्छ ।त्यसै कारणले गर्दा उच्च पहाडमा बैशाख–जेठ,मध्य पहाडमा फागुण–जेठमा र बेसीं तथा तराइमा माघ–जेठमा यसको बीउ रोपिन्छ या बेर्ना सारिन्छ ।
बाली टिप्ने समयः उच्च पहाडमा असार–साउन,मध्य पहाडमा जेठ–साउन र बेसीं तथा तराइमा बैशाख–असोजमा बाली लिइन्छ ।
जमिनको तयारीःकरेला लगाउने जमिनको लागी २–३ पटक गहिरो गरी २–३ पटक जोत्नु पर्दछ । ड्याङ २.५ मि.को चौडा र लम्बाइ आवश्यकता अनुसार बढाउन सकिन्छ ,जसमा २ हार बीउ वा बेर्ना रोपिन्छ ।
मलखादः एक रोपनी जमिनको लागी १५०० के.जी. गोबर मल,५ः४ः४ क्रमशः नाइट्रोजन,फस्फोरस र पोटास दिनु पर्दछ । टप ड्रेसिङ युरिया १.२५ के.जी. बोटले त्यान्द«ा निकालेपछि दिनु पर्दछ र पुनः फुल फुलेपछि राख्नु पर्दछ ।
बेर्ना सार्ने दुरीः हार देखि हारको दुरी १५० से.मि.र बोट देखि बोटको दुरी १०० से.मि. फरक पार्नु पर्दछ ।
बेर्ना सार्ने तरीकाः२५ घन सेन्टि मिटरको खाडल खनेर मल,माटो मिसाएर रोप्नु पर्दछ ।
थाक्रा दिनेः यो एक लहरेबालि भएकाले थाक्राको अति आवश्यक रहन्छ । थाक्रा दिँदा ड्याङको दुबै तर्फबाट घोँचा गाडि टाँड बनाइदिनु पदर्छ । माटो खुकुलो पार्न र झारको रोकथाम सहित माटोमा हावाको चहलपहल कायम राख्न गोडमेल गर्नुपर्दछ । थप दुई पटक युरिया दिने बेलामा गोडमेल दिुनु उत्तम रहन्छ ।
फल टिप्नेः बेर्ना सारेको ५०–६० दिनमा उपभोग गर्न उपयुक्त रहन्छ । यसको हरियो फल खाने भएकाले फल लागको २ हप्ता पछि २–३ को फरकमा टिप्नु पर्दछ ।
उत्पादनः एक रोपनी जग्गामा ५००–१००० के.जी. कलिला फल यसले उत्पादन दिन्छ ।
पोष्ट हार्भेष्टः बाली टिपे पछि कीराले खाएको,चोटपटक लागेको,आर्कषक रंग नभएको फल,आकार लाई ग्रडिङ गर्ने टोकरी वा क्रेटमा राख्ने । यसको लागी १२ –१५ डि.से. तापक्रम र ७५– ८५% जति आद«तामा भण्डारण गर्न उपयुक्त मानिन्छ ।
परिचयः यो एक पहिले देखिनै खेती गरिदै आएको तरकारी बालि हो । यसको औशधिय महत्व पनि छ जस्तै उच्च रक्तचाप,पेटका बिरामीलाई लौकाको सेवनले लाभदायक गर्छ । सो कारण तथा स्वादिष्टताको कारणले पनि यसको बजार माग बढ्दो छ ।
हावापानी र माटोः यो एक न्यानो मौसमको बाली हो, सो कारणले तुषारो, हावाहुरी सहन सक्दैन । यसको उपयुक्त बृद्घि बिकासको लागी २५– २८डि.ग्री.सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त हुन्छ भने पि.एच्. चाँहि ६–७ उचित रहन्छ ।
जातहरुः गाँउ घरमा अझै पनि स्थानिय जातका बिउ लगाइन्छ । सँगसगै पु समर,काबेरी,एन्.एस्.४२१,अनमोल आदि हुन् ।
बीउ रोप्ने समयः हावापानि तथा मौसमको आधरमा बाली लगाउने समय फरक फरक हुन्छ ।त्यसै कारणले गर्दा उच्च पहाडमा फागुण–चैत,मध्य पहाडमा माग–जेठमा र बेसीं तथा तराइमा माघ–जेठमा यसको बीउ रोपिन्छ या बेर्ना सारिन्छ ।
बाली टिप्ने समयः उच्च पहाडमा असार–असोज,मध्य पहाडमा चैत–कार्तिकमा र बेसीं तथा तराइमा चैत–भदौ सम्म यसबाट फल लिन सकिन्छ ।
जमिनको तयारीः लौका खेती गर्दा २–३ पटक राम्रोसँग खनजोत गर्ने, तरकारी लगाउने ड्याङ २५० से.मि.को बनाउने, ड्याङ–ड्याङको बिचमा ५० से.मि.को कुलेसो बनाउने जसमा हिडडुल गर्न, सिंचाई गर्न सहज रहन्छ ।
मलखादः एक रोपनीमा १५०० के.जी. वा ७५ डोको गोबर मल राख्ने । २ः१ः१ के.जी. क्रमशःनाइट्रोजन,फस्फरोस,पोटास राख्नु पर्दछ । बाँकि एक–एक भाग नाइट्रोजन लहरा आउँदा र बाँकि फुल्दा राख्नु पर्दछ ।
बेर्ना सार्ने दुरीः यो सोझै बिउ वा बेर्ना रोप्ने भएकाले एक रोपनीमा १०० ग्राम जति बिउँ आवश्यक पर्दछ ।बेर्ना वा बिउ रोप्दा ३० घनमिटर खाडल बनाई मल,माटो मिसाएर तयार गर्नु पर्दछ र बोट देखी बोट र हार देखी हार पनि २ मिटरको फरकमा लगाउनु पर्दछ । एउटा ड्याङमा २ हार बिउ वा बेर्ना रोपिन्छ ।
काटछाँटः काँटछाँट भन्ने बित्तिकै बुढा,रोगी, पुरानो पात तथा हाँगा फल मुन्टा हटाउने कार्यलाई बुझिन्छ । सो कारणले आवश्यकता अनुसार काँटछाट गर्नु पर्दछ ।
फल टिप्नेः फल अलि कलिलो र बजार योग्य भएसी फललाई भेट्नुलाई चट्ट काटेर बालि लिइन्छ ।
उत्पादनः खेती गर्ने तरीका,जात, जमिन, मौसम अनुसार उत्पादनमा फरक आउँद छ । औसतमा १५०० देखी २५०० के.जी. प्रति रोपनी उत्पादन दिन्छ ।
पोष्ट हार्भेष्टः स्थानिय बजारको लागी बजार योग्य फलहरु ग्रेडिङ गरेर बाँसको टोकरी वा प्लाष्टिकको क्रेटमा राख्ने र ढुवानी गर्ने,यसको फल छिप्पीए पछि खान मिल्दैन सो कारणले ठण्डा छाँयामा ३–५ दिन सम्म मात्र फललाई राख्न सकिन्छ ।
श्याम कुमार श्रेष्ठ हाल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमाल्याब टेक्निसियनका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७८